» विभेद निर्मुल कहिले ?
१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १८:१७
हिजो देखी आएका समाचारहरु मध्ये जाजरकोटका युवा नवराज वि.क.को मृत्युको समाचारले म र म जस्ता धेरैै युवाहरुको मस्तिष्कमा कालो बादल मडारिएको छ । अनेकौं प्रश्नहरु मस्तिष्कमा फनफनी घुमिरहेका छन् । जात नमिलेकै आधारमा कसरी हामी जस्तै युवा मारिन सक्छ ? हामी कुन युगमा छौं ? करिब २ लाख बर्ष पहिले होमो स्यापियन्स(मानव जाति)को उत्पत्ति भएको मानिन्छ । हामै्र विधा होमोमा पर्ने अन्य प्रजातिको त्यसभन्दा अघि नै उत्पत्ति भैसकेको थियो ।
७० हजार वर्ष अघिसम्म मानव जाति पृथ्वीको अन्य प्राणि जस्तै थियो, अझ कमजोर नै थियो । पुर्वी अफ्रिकाबाट शुरु भएको मानवजातिको यात्रा आज पृथ्वीको सबैभन्दा सर्वोश्रेष्ठ प्राणी बन्दै विश्वको हरेका कुनामा आफ्नो उपस्थित जनाउन सफल भएको छ । कुनै समय कमजोर प्राणीको रुपमा नगन्य अवस्थामा रहेको मानव जाती आज पृथ्वीमा एक छत्र राज गरिरहेको छ । संज्ञानात्मक क्रान्तिबाट गुज्रिए पछि मान्छेले अदभूत विकास गर्यो । श्रम गर्ने क्रममा मान्छेले भाषा सिक्यो, भाषालाइर्् गफ गर्न र काल्पनिक यथार्थता बनाउन प्रयोग गर्न लाग्यो जसले गर्दा धेरै संख्यामा एक अर्कासंग सहकार्य गर्न सजिलो भयो जसको कारण श्रमको औजारमा पनि विकास भयो, अन्तत त्यहि विकसित औजारले गर्दा श्रम उत्पादनमा वृद्धि हुदै हुदै गयो । मान्छेले औजारको प्रयोग गरेर अरु प्राणीभन्दा सजिलो गरी शिकार गर्न थाल्यो, आफूभन्दा वलिया प्राणीसंग लडन थाल्यो र आफूलाई अरु प्राणी भन्दा अब्बल बनाउन थाल्यो ।
१० हजार वर्ष देखी मान्छेले खेति गर्न शुरु गर्यो र जब खेति शुरु भयो मान्छे एकै ठाउँमा स्थायी रुपमा घर बनाएर बस्न थाल्यो । घर पालुवा जनावर पाल्न शुरु गर्यो । जब देखी खेति गरेर बस्न शुरु भयो नीजि सम्पतिको मोह पनि त्यसैबेला देखि शुरु भयो । जगंलि युगको अन्त्य बाट कृषि युगको प्रारम्भ भयो । कृषि युग नै राजनीति, राज्य, धर्म, युद्ध जस्ता कुराको थालनीको जग हो । यसरी आधुनिक मानव जातिको उदयनै मानव समाजको विकासको मूल कारण हो । मान्छेहरु खेति किसानी गर्न थालेपछि समुदायमा बस्न थाले । विस्तार विस्तार खेतिजन्य जमिनकै लागी समुदाय समुदायवीच युद्ध हुन थाल्यो । यसक्रममा युद्धबाट जसले जित्यो त्यसले जमिन लिन शुरु भयो । शुरु शुरुमा हार्ने समुदायका सबैलाई मार्ने चलन थियो पछि हार्नेहरुलाई दास बनाएर राखी खेतमा काम गराउन थालियो । यसरी समयक्रममा राज्यको उत्पत्ति भयो । ५००० बर्ष अघि राज्यको उत्पत्ति भएको मानिन्छ । विस्तार विस्तार राज्य राज्य वीच युद्ध हुन थाल्यो । त्यसले सम्राज्यको उत्पत्ति भयो ।
४२५० वर्ष अघि सारगोन भन्ने ठाउमा अक्केडियन सम्राज्यालाई पहिलो सम्राज्य मानिन्छ । त्यसबेला जब सम्राज्यले अर्को कुनै राज्यलाई हमला गर्थ्यो वा राज्य राज्य वीचको युद्ध पछि जितेको राज्यमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र त्यस राज्यका जनताले विद्रोह नगरुन भन्नका लागी शासकहरुले धर्म नामको काल्पनिक यथार्थता को निर्माण गरे । त्यहाँका पुराना बासीलाई श्रममा प्रयोग गर्न र दास बनाइ राख्न धर्मले जातको निर्माण गर्यो । मान्छे अरु जीव र प्राणीभन्दा दुई क्षमताले फरक छ । पहिलो काल्पनिक यथार्थता निर्माण गर्न सक्ने र दोश्रो श्रमका अस्त्रहरुको निर्माण र उपयोग गर्ने क्षमता । यहि दुई क्षमताले नै ७० हजार वर्षको छोटो अवधिमा नै मान्छे सबैभन्दा कमजोर प्राणीबाट सर्वोश्रेष्ठ प्राणी बन्न सफल भयो ।
यसरी आजको विज्ञानले के बताउँछ भने जात, धर्म, र विचारहरु त मान्छेले नै निर्माण गरेका हुन । मानव सभ्यताको विकासको क्रममा उत्पत्ति भएका हुन । यो सत्य कुरा बुझ्न नसक्दा मान्छे जातका नाममा पिछडिनु पर्यो, मारिनु पर्यो । कुनै समयमा युद्धमा सजिलोको लागी, सम्राज्य विकास गर्न सजिलोको लागी र आफ्नो आधिपत्य जमाई राख्नका लागी विभिन्न भुगोलमा विभिन्न खालका धर्म र जातको आविष्कार भएको हो र यसका आविष्कारक शासकहरु हुन् ।
संसारका विभिन्न धर्म मध्ये हिन्दु धर्म पनि एक हो । यो प्राचिन धर्महरु मध्ये एक मानिन्छ र एक प्रकारको पोलिथेइज्म (बहुदेववादी ) धर्म हो । यस धर्ममा ४ वटा जात छुटिएका छन । माथिल्लोमा ब्राहमण, दोश्रोमा क्षेत्रिय, तेश्रोमा वैश्या र चौथोमा शुद्र । विभिन्न धर्ममा हुने छुवाछुत जस्तै यस धर्ममा पनि शुद्र वर्णका मान्छेलाई तल्लो जात भनि अवहेलना थियो, र छुवाछुत गरिन्थ्यो । सयौ वर्षदेखी यहि चलनमा हाम्रा पुर्खाहरु अभ्यस्त हुदै आए । जातको आधारमा दलितलाई धेरै कुरा गर्न बन्देज थियो । कथित उपल्ला जातकालाई छुन पनि हुन्थेन तल्लो जातकाले । यहि अभ्यास संस्कृतिका रुपमा रहयो र यो चलन धर्मको रुपमा सत्ताधारीहरुले चलाएका थिए ।
त्यतिबेला विज्ञानको विकास भएको थिएन । मान्छे विजुलि चम्कनु लाई पनि दैवको लिला भन ठान्थ्यो र पानि नपर्नुलाई देव रिसायो भन्थे । तर आज युग फेरिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको व्यापक विकास भएको छ । मान्छेलाई कसरी अमर बनाइराख्ने भनेर रिसर्च (Gilgamesh project ) चलिरहेको छ । ३० हजार बर्ष पहिले लोप भएको हाम्रै एक प्रजाति neanderthals लाई पुन उत्पति गराउने रिसर्च भैरहेको छ । आजको विज्ञान प्रविधि सुपर हुमनको खोजमा लागेको छ । तर आज हामी अझै जात र छुवाछुतको बहसमा छौ । हामी अझ यो बुझ्न सकिरहेका छैनौ कि हामी एउटै प्रजातिका हौ त्यो हो होमो स्यापियन्स र धर्म र भगवान हाम्र्रै पुर्खाले निर्माण गरेका काल्पनिक यथार्थता मात्रै हो । लामो समयसम्म हाम्रो पुर्खा यही काल्पनिक यथार्थतामा यति अभ्यस्त भए कि हामीलाई समेत यो संस्कृतिको पुस्तानतरण गरे । हाम्रो मस्तीष्कमा जात र धर्मको गहिरो छाप स्थापित गरे । हामी विज्ञानमा विश्वास गर्छाै, मानवतालाई धर्म मान्छौ तर त्यो पुर्खा देखीको अंधविश्वासको गहिरो छाप कुनै न कुनै रुपमा कहि न कहि प्रकट भइछाडछ । जाजरकोटमा भएको घटना त्यही मानसिकताको उपज हो । यसलाई मेटाउन जरुरी छ । व्यवस्था परिवर्तन भएर ऐन कानुनले मात्र त्यस्तो अंधविश्वास मेटिदैन । वृहत चेतनाको विस्तार गर्न जरुरी छ ।
कतिपय पढेलेखेका विद्धानहरुकै मुखारविन्दुबाट जातिको आधारमा तुच्छ टिप्पणी सुनिन्छ, समाजसेवि, राजनीतिज्ञहरुनै जातको कुरामा कन्भिन्स् छैनन भने दूर दराजका जनताको त के कुरा भयो र ? यसको कारण के हो भने हाम्रो अंधविश्वासमा अभ्यस्त पुस्तादेखीकै संस्कृति । अब चेताना ल्याउने भनेको विज्ञानमा आधारित सबै खाले शोषण रहित संस्कृतिको थालनी र अभ्यास । हामी विज्ञानमा विश्वास गर्ने सचेत युवाको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी हुन्छ त्यस्तो समाजको निर्माणको अभियान चलाउने । सरकारले पनि ऐन कानुनको कार्यन्वयनको संंग संगै मान्छेलाई चेतनाको माध्यमबाट रुपान्तरण गर्ने अभियान चलाउन पर्छ । हामीले बुझन पर्छ सामाजिक रुपान्तरण फोर्सबाट मात्रै हुदैन, चेतना नै चाहिन्छ । अंंधविश्वासको संस्कृतिलाई बैज्ञानिक संस्कृतिको अभ्यासले मात्रै बदल्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा नवराज विक जातीय विभेदको शिकार भए । नवराज सहित मृत्यु हुने सम्पूर्ण युवा साथीहरुलाई हार्दिक श्रद्धान्जली । देशले क्षमतावान भविष्यका कर्णधार गुमाएको छ । उसको मृत्युले केही सिकाउला नसिकाउला तर एउटा प्रश्न फेरी पक्कै उठाएको छ, जातीय विभेदे निर्मुल कहिले हुन्छ ?